မင်းအတွက် ဆေးတစ်ခွက် [System] - အပိုင်း (၂) ​သေ​လောက်​သည့်​မစ်​ရှင်​ - Wattpad
1.1K 242 7
အချိန်ခဏကြာပြီးနောက် ကုကျိုး၏ စိတ်အာရုံထဲတွင် ကျင့်ကြံရေးလမ်းစဉ်တစ်ခု ရုတ်တရတ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၄င်းကို
<< နတ်ဆေးပညာစိတ်​၀ိညာဉ်ကျ​င့်ကြံရေးနည်းလမ်း>> ဟုအမည်တပ်ထားသည်။
သို့သော် ထိုကျင့်ကြံရေးနည်းလမ်းက အဆုံးအထိမပါဘဲ အစပိုင်းမိတ်ဆက်အခန်းတစ်ခုကိုသာမြင်ရသည်။ ထိုမိတ်ဆက်အခန်းက စာတစ်ခန်းတည်းဆိုသော်လည်း အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားကာ နက်နဲရှုပ်ထွေးလှသည်။ ကုကျိုးသည် ဉာဏ်ကောင်းပြီး တိုးတက်သည့် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှလာသော ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဤကဲ့သို့ ထူးခြားပြီး လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော နည်းနာနိဿယများကိုမူ သူဘယ်သို့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မည်နည်း?
ဒါကိုနားမလည်ရင် သူကဘယ်လိုလုပ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာလဲ? System က သူ့ကို ဒီကျင့်စဉ်ပေးတယ်ဆိုကတည်းက ဒါက သူ့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး​နည်းလမ်းမို့လို့ ပေးတာဖြစ်ရမယ်။ တကယ်လို့ သူ ဒါကို ကောင်းကောင်းမသင်ယူနိုင်ရင် ဒီဟာက နောင် သူရဲ့ဆေးလုံးတွေကို သန့်စင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကို အကျိုးသက်ရောက်စေမှာလား?
သူ့ခမျာ ဒီကိုရောက်ရုံရှိသေးသည် ပြဿနာပေါင်းများစွာဖြင့် ဝန်းရံနေရပြီဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်တော့ System တစ်ခုလုံးရှိနေတာတောင် နည်းနည်းမှ မလွယ်ကူပေ။
System က ကုကျိုးကို မေးခွန်းမေးဖို့အချိန်တောင်မပေးဘဲ တာဝန်တစ်ခုကို ကြေညာလိုက်သည်။
[ကျင့်ကြံရေးမစ်ရှင် : ဆေးဖက်ဝင်ချီစွမ်းအင်အမျှင် ၃၀ စုဆောင်းရန်]